Miala satana ! | NewsMada
Miala satana !
Hifantoka amin’ny fitsidihan’ny Ray masina, François eto Madagasikara ny sain’ny rehetra, na mpino na tsy mpino katolika. Ora sisa andrasana dia higadona eto amin’ity tanindrazana iombonana ity, izany raiamandreny ara-panahy, maneran-tany, izany. Efa dodona ny rehetra, ny handray azy, satria vitsy ihany ireo firenena, vangian’izany, Ray masina izany.
Miandrandra, fiovana amin’ny lafiny maro, ny vahoaka malagasy, amin’izao fandalovan’ny Ray masina izao. Eo aloha, ny hitondrany am-bavaka, ity firenena, anjakan’ny faharatsiana isan-karazany ity. Miala satana, mpandrava hefa eto Madagasikara.
Hatramin’izay mantsy, nampiaiky ny rehetra fa nitambesaran’ny ota maroloko, i Madagasikara. Ny Ray masina anefa tena faly amin’izao fiaviany eto izao, satria henony fa firenena tsara tarehy ary miavaka aty Afrika i Madagasikara. Endrika ivelany izany, fa ny ao anaty, feno fahotana. Mino ny vahoaka fa ny Ray masina, hanadio izany, amin’ny ranom-bavaka ka miala satana.
Manaiky ny rehetra fa tsy maintsy hitondra fiavaozana ho an’ny firenena malagasy, ny fandalovan’ny Ray masina. Anisan’izany, ny fahadiovana efa hita taratra, ka tsy ahitana intsony, ety an-tanan-dehibe, ireo “4’mi “, nandoto sy nanimba ny endriky ny Renivohitra.
Nihatsara sy nihanazava ihany koa ny lalan-dehibe rehetra. Eny fa na tsy izy manontolo aza dia efa isaorana ny Ray masina, satria raha tsy ny fandalovany, tsy vita izany. Koa didiana amin’ny anaran’i Jesoa, miala satana.
Tsy handalo sy ho fahatsiarovana fotsiny ihany anie izao fivahinian’ny Ray masina izao, fa hitoetra, amin’ny Malagasy tsy ankanavaka, ny tso-dranony sy ny vavaka hataony, ka hiala satana ary tsy hanana toerana eto intsony.